Posted by ZT at 3:24 AM
သူဟာသူ မဟုတ်တာလုပ်ထားပြီးတော့။ ဟဲဟဲ။
ကျုပ်လဲ တစ်ခုခုဆို ကြောက်တယ်။ သူများမှာဘာဖြစ်ပြီကြားရင်
ကိုယ့်မှာများရှိလား။ ကူးစက်ရောဂါတစ်ခုခုဆို ကိုယ်မှာပဲရှိနေသလိုလို။
ဘာမှမဆိုင်လဲ ကြောက်တာပဲ။ စိတ်ရောဂါဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်။
Haha...... thi nay tal naw......
Nah. My girlfriend not that bad. :D
တော်တော်ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ နဂတစ်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းနေတာ ဖတ်နေရင်း။ ဟုတ်ပါ့ ၀တ္တုတို ဟုတ်လို့လားးP
ဖတ်ရင်း ရင်တုန်လိုက်ရတာ။ နောက်ဆုံးကျမှပဲ ဟင်းကနဲ သက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ်။
ဖိနပ်ထူထူကြီး စီးထားတယ် မဟုတ်လား :D
ဟုတ်တယ် အဲဒီကိစ္စက သိတ်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ။် risk ထဲပါတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ အရမ်းစိတ်ညစ်ရတယ်။
ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်.. ကိုယ်က သန့်အောင်နေလည်း မတော်တဆ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျခဲ့လို့လည်း ကူးစက်နိုင်တာပဲလေ.. :D အေပိုးရှိတဲ့ဓားနဲ့ ရှမိတာတို့၊ ကိုယ့်ကိုယ်က အနာအပေါက်အပြဲနဲ့ အေပိုးနဲ့ သွားတွေ့မိရင် ကဲ.. ဘယ်နှယ့်လုပ်မလဲ?